Otomatiki Plastiki Sheet Vagadziri, Vatengesi - China Otomatiki Plastiki Sheet Factory
Nyowani Type CNC yekugadzira pepa yekutengesa muchina
Kushanda uye Chimiro 1.Welding Rudzi: yakatwasuka weld uye rolling pombi. PLC yekubata-pani yekudzora sisitimu, inokwanisa kugadzirisa otomatiki kudziya tembiricha, nguva uye kumanikidza zvinoenderana nematanho ezvinhu zviri kugadziriswa. 2.Control system Nokia PLC, 7-inch color inobata skrini-Nokia. 3.Brand-nyowani yakasanganiswa furemu, yakanyatsovimbika nzira yekufambisa, yakadzikama pabasa uye yepamusoro ini ...
Kushanda uye Feature SUD-BO1530 akateedzana ane basa rakasimba nekuita kwakanaka, nyore kushandisa, yakasimba uye yakasimba. Inoiswa zvakanyanya muhuni, kushambadzira, PVC, PE, PP, PPH, acrylic, aluminium epurasitiki ndiro etc. 1.Adopt rinorema basa muchina furemu, inoumbwa neCCC planer-mhando yekugaya muchina, yakasimba, kugadzikana. 2.Kukwirira kwakaringana kweTaiwan mutsara wedhairekitori, yakanyanya kunyatso helical giya rack kurongedza. Kugadzikana kwakawanda, kunyatsojeka. 3.Enlarged inotsigira furemu, simbisa hutachiwana kudzikama ...
Otomatiki epurasitiki jira rekucheka muchina
Kunyorera uye Feature 1.Unique yakazara-yakavharirwa kucheka, yakachengeteka uye yakachena. 2. Kugona kwekugadzirisa otomatiki kumhanyisa mhanya maererano nezvinhu zvakasiyana, zvakapusa uye zviri nyore mukushanda. 3.Unique otomatiki yekuchenesa uye dedusting system, kuverengera guruva kuti ribudiswe zvakanyanya, kucheka kuve nyore uye shavings inounganidzwa zvakanaka; 4.Front uye neshure chinzvimbo Switch hurongwa, akurumidze uye yakarurama Positioning; 5.Saw blade kutonhora system, kugadzirisa iyo jamming uye kumisa mamiriro ...
Otomatiki epurasitiki jira garo fusion kutenderera uye kukotama muchina
Kushanda uye Feature Welding Type: yakatwasuka weld uye rolling pombi. PLC yekubata-pani yekudzora sisitimu, inokwanisa kugadzirisa otomatiki kudziya tembiricha, nguva uye kumanikidza zvinoenderana nematanho ezvinhu zviri kugadziriswa. Kudzora sisitimu Siemens PLC, 7-inch color inobata skrini-Nokia. Brand-nyowani yakasanganiswa furemu, yakanyanya kuvimbika kufambisa mechina, yakatsiga pabasa uye iri nani mukuita ...
Otomatiki epurasitiki jira garo fusion muchina
Otomatiki epurasitiki jira rakakotama muchina
Kushanda uye Feature Welding Type: vakafugama epurasitiki pepa kubva 0-145 °. PLC yekubata-pani yekudzora sisitimu, inokwanisa kugadzirisa otomatiki kudziya tembiricha, nguva uye kumanikidza zvinoenderana nematanho ezvinhu zviri kugadziriswa. Kudzora sisitimu Siemens PLC, 7-inch color inobata skrini-Nokia. Brand-nyowani yakasanganiswa furemu, yakanyanya kuvimbika kufambisa mashandiro, yakatsiga pabasa uye yepamusoro mu perfor ...